I-Casa di Lucienne (iNdlu enkulu eyi-120m²)
ILa casa Lucienne likhaya lethu losapho, uyakuxabisa ukuzola, ukuba kufutshane kwesixeko saseAjaccio kunye nezinto ezininzi ezijikelezayo.
Ilungele iholide yosapho.
Isiteyimenti eyi-120m² kwindlu ethe cwaka kunye nethafa yayo eyi-70M² embindini wentlambo yeGravona.
Indlu ikwimigangatho emi-2, uya kuhlala kumgangatho osezantsi (umphezulu oyi-120m²), umgangatho woku-1 yindlu yabucala (ehlala okanye engeyiyo ngokwexesha lonyaka) uzimele geqe (umnyango owahlukileyo) .Zonke iifoto ezikuwo. Isibhengezo ngamagumbi abucala
Indlu yenziwe ngokukodwa indawo enkulu yokuhlala eyi-50M², igumbi lokuqala eliyi-12M ² kunye negumbi lesibini eliyi-11M ² kunye nezindlu zabo zokuhlambela ezihlonyelweyo. Amagumbi axhotyiswe nge-LCD TV, kunye neebhedi ezintsha kwi-180 * 200 kunye ne-140/200 abahambahambayo banqwenela ukuhlala ngaphezu kwezine endlwini, i-sofa yegumbi lokuhlala nayo iyaguqulwa ukuze ungeze iibhedi ezi-2.
Yonke ilinen ibandakanyiwe kwirenti, kufuneka ubeke iibhegi zakho kwaye ujabulele iiholide zakho
Unokonwabela isidlo sakusasa kwi-terrace kusasa ukonwabela ukuzola kunye nepanorama yentlambo kunye neentaba; Ekupheleni kosuku uya kuba nako ngokwaneleyo ukuphumla kwigumbi lokuphumla egadini malunga ne-aperitif kunye nebarbecue.
4.69 · Izimvo eziyi-140
Ilali yaseTavaco isembindini wentlambo yaseGravona; Le ntlambo ye-Ajaccien (uyi-18Km ukusuka kumbindi wedolophu i-Ajaccio) yenziwe ziilali ezininzi ezijinga phezu kwentaba kumacala omabini omlambo i-A Gravona ekwabonelela ngeendawo zokuhlambela ezintle. (5mn ukusuka endlwini). Intlambo kunye needolophana zayo ziyaziwa ngokuzola kunye namagcisa abo amaninzi, abagcini bolwazi kunye ne-gastronomy Corsica; Sidibana apha naphaya umalusi, umsiki, umfuyi, singasathethi ke ngeendawo zokuhlala ezininzi apho unokonwabela izidlo zokwenyani zaseCorsican ... zonke zikwindawo egciniweyo eneepanorama ezintle ethafeni.
Kuba sporty ngakumbi intlambo indawo yokuqalwa iindlela ezininzi intaba ngokusebenzisa maquis kunye Corsica intaba kwaye nge (URL HIDDEN) kunokwenzeka ukwenza eminye imisebenzi entlanjeni (max 20mn ngemoto) Ukunyuka kunye paragliding of Vero the umkhondo weKarting ethafeni, okanye ukukhwela ihashe eSarrola. Iilwandle ezinesanti emhlophe kwingingqi ye-Ajaccian nazo zikude ngeekhilomitha ezimbalwa.